Surface Laptop 4 inoonekwa pamhepo neIntel Tiger Lake-U uye AMD CPUs
Muri pano: musha / Technology News / Surface Laptop 4 inoonekwa pamhepo neIntel Tiger Lake-U uye AMD CPUs
Microsoft inogona kunge ichironga kuvhura Surface Laptop 4 muna Kubvumbi 2021 ine Surface edition AMD processor uye Intel Tiger Lake-U, maererano nematanho matsva ezvinyorwa.
Microsoft yakaparura yekutanga AMD-inofambiswa neSurface Laptop mu2020 uye inouya netsika yeRenzen 7 CPU ine Radeon RX Vega 11 mifananidzo. Panguva iyoyo, mishumo yakaratidza kuti Microsoft iri kushanda ne AMD pane zvigadzirwa zvakawanda izvo zvinozofukidza akawanda Hardware mazera.
MunaNdira, zviwanikwa zveindasitiri zvakatizivisa kuti iyo inotevera-gen Surface Laptop inoshandisa iyo tsika AMD CPUs pamhando dzose. Parizvino, AMD CPU anopihwa neiyo 15-inch musiyano chete, asi gore rino, idiki 13.5-inch modhi inoshandisa ese maviri ma AMD neIntel CPU.
Iye zvino, mabhenji matsva akaburitswa anoratidza kumisikidzwa kwakawanda kweiyo Surface Laptop 4. In imwe bhenji, iyo Laptop iri kushandisa Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake-U) ine yakakwira wachi kumhanya kwe4.40Ghz uye 8GB RAM.
Chimwe chiratidzo inoratidza ichimhanyisa tsika ye AMD processor inonzi "Microsoft Surface Edition".
Sezvauri kuona mune iri pamusoro skrini, Ryzen 5 3580U yakanyorwa padyo nezita re processor, asi isu tine chivimbo chekuti uyu anongobata nzvimbo.
Iyo isina kutaurwa processor inogona kuve chikamu chemhuri ye AMD Renoir, asi isu hatizive kana Microsoft iri kuronga kushandisa Ryzen 5 4000 kana 5000.
Nepo kuzivikanwa kwepurosesa kuchiri kusazivikanwa, inoita kunge mushini une simba uye ichapfuura zviri nyore iyo Surface Laptop 3
Surface Laptop 4 inotarisirwa kuburitswa zuva
Hatizive chaizvo kuti iyo hofori yeRedmond iri kuronga kuvhura iyo inotevera-chizvarwa Surface Laptop, asi mishumo yakaratidza kuti chishandiso chichavhura muna Kubvumbi 2021.
Mushure me laptop, isu tiri kutarisira imwe Surface kifaa kubva kuMicrosoft imwe nguva muna Gumiguru uye inogona kuzivikanwa se 'Surface Pro 8'. Kusiyana neiyo Pamusoro Pro 7+, Surface Pro 8 inotakura ine yakagadziridzwa dhizaini uye yemukati Hardware, inosanganisira nyowani 32GB RAM musiyano.
The post Surface Laptop 4 inoonekwa pamhepo neIntel Tiger Lake-U uye AMD CPUs yakatanga kutanga Windows tsva
Filed Under: Technology News Tagged With: Microsoft, Surface Laptop, Tiger Lake (microarchitecture)